mairie-antananarivo – « Operation taxi » ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
« Operation taxi » ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
auteur 31 jolay 2017 Commentaires fermés
Ao anatin’ny ezaka amin’ny ny fanatsaràna ny fitaterana sy ny fifamoivoizana eto anivon’ny Tanànan ‘Antananarivo Renivohitra dia natao ny fanenjehena ireo taxi tsy manara-dalàna na ny « Operation taxi ».
Efa nanomboka ny asa. Hatreto dia 13 no taxi Ville no napetraka eny amin’ny « centre de contre visite service voirie » eny Antsakaviro.
Ny Sampan-draharaha misahana ny fitaterana eto anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo sy ny Polisy monisipaly ary ny Polisy nasionaly no niaraka manatanteraka ity hetsika ity.
Sazy hentitra no omena ireo taxi sandoka tsy manana taratasy ara-dalàna amin’ny maha-taxi azy fa mampiasa taratasy fiara tsotra (papier voiture plaisir). Ampidirina « fourièrre » 10 andro no sady asaina mandoa vola (droit de fourrière) ireo fiara ireo ary alaina ny taratasiny. Asaina lokoin’ny tompony loko tsy mifandraika amin’ny taxi (beige crème) ny fiara . Ary tsy mahazo manao taxi intsony raha tsy mahafeno ny antonta-taratasy rehetra amin’ny maha-taxi azy.
Nanambara Andriamatoa Landy RAVELOSON, Talen’ny sampan-draharaha misahana ny fitaterana fa hitohy hatrany ity hetsika ity mba hanafoanana ireo taxi rehetra tsy manara-dalàna, ary tsy ny faux-taxi irery ihany no henjehina fa na ny taxi tsotra aza ka tsy manaraka ny fepetra rehetra tokony ho izy.
AO ANATY » Fifamoivoizana